Kushongedza Zvishongedzo Kuronga - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Midziyo kuFBA Warehouse
Mr. Xie, mudiwa weLiXing Global Logistics kuGuangzhou, anonyanya kugadzirisa midziyo yemumba uye ane chitoro chake kuAmazon. Mr. Xie vanga vachishandisa yedu yeAmerican yakakosha mutsara logistics chiteshi. Kubva pakuendeswa kwekutanga kwemadhora madiki kune huwandu hukuru hwekutengesa zvinhu kunze kwegungwa, madhiragi aVaXie anga achiwedzera, uye kubatana kwedu kwave kunakidza.
Nekuti YiXing Global Logistics ine hunyanzvi muSino-US yakasarudzika mutsara wekufambisa kwemakungwa, isu tine anopfuura makore gumi ekushambadzira uye ruzivo rwekufambisa muUS, saka isu tine ruzivo rwakapfuma mukushanda kwekufambisa kweSino-US, uye zvakare kurega vatengi iva nechokwadi. YeAmazon FBA, kune zvekare nzira dzakasiyana dzekufambisa, kunyanya mumutengo uye nguva yeLCL, uye isu tinogona kuita zvirongwa zvakasiyana zvekufambisa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi kuzadzisa zvakasiyana zvinodiwa nevatengi.
Mr. Xie vagara vakachengetedza hukama hwakanaka hwekudyidzana nesu. Kunyangwe paive nematambudziko madiki panguva iyi, ese akagadziriswa nekukurumidza. Basa rakadaro rinobudirira uye rine hanya rakagutsa Mr. Xie zvakanyanya. Munguva pfupi yapfuura, VaXie vanoronga kutumira rimwe batch rezvinhu kuFBA yeAmazon muUnited States, huwandu hwayo hunosvika makumi maviri emamirimita. Maneja Peggy uyo akataurirana naVaXie zvakare akatevera nenguva uye akataura mutengo weAmazon FBA kutumira huwandu hwezvinhu zvakapetwa kaviri kumusuwo. Mutengo unosanganisira fizi yekubvisa kwetsika, fizi yekubvisa kwetsika, mubhadharo wekutumira uye mutero wekuenda kuchiteshi, pasina chero chinhu chakashandiswa.
VaXie vakavimbiswa zvakare kuti kubatana kwedu kwenguva refu kwaive nekunzwisisa kwakanaka kweiyi mitengo-isina mitengo, saka isu takabva tapedzisa chirongwa chekuendesa. Pasina nguva ndakaronga kuunganidza pasuo nesuo kuti ndiendese zvinhu kudura redu zvakachengeteka, uye taigona kurodha nekutakura zvinhu kana zuva rekutumira raifanira. Munguva iyi, kune zvekare mhinduro inokwana panguva yekugadziriswa kwezvinhu, hapana chikonzero chekushushikana, chengetedza nguva uye dambudziko kune vatengi!
Kana iwe uchida, pls inopesana neyedu bhizinesi mutsetse: +86 17322126273 (Wetchat yakafanana nhamba).